Rita, Writing for My Sake!: One After Another !
Posted by Rita at 1/21/2009 10:40:00 PM
အခုပို့လေးကို ဖတ်ပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ် ဖြေသိမ့်နိုင်သွားတယ်။ ဟားဟား ပုလုကွေး နင့်လိုပဲ ဘဝတူတွေ ရှိတယ်လို့။ ဟုတ်တယ် ဗျာ တစ်ခါတလေ အလုပ်များရင် ယားရင်တောင် ကုတ်ဖို့ မအားဘူး။
မှတ်သားဖတ်ရှုသွားပါတယ် ခင်ဗျာ..။ ဘဝတိုက်ပွဲ၊ ဆိုတဲ့ စကားလုံး အပြင် ဘဝ ပြေးပွဲလို့လဲ ဆိုရတော့မယ်.။ တော်တော် ခက်မယ် ထင်မိပါတယ်။